Ragga way necebyihiin Haweeneeda loo raaxeeyo iyada kaliya | shumis.net
Home » galmada » Ragga way necebyihiin Haweeneeda loo raaxeeyo iyada kaliya
Ragga way necebyihiin Haweeneeda loo raaxeeyo iyada kaliya
Hadaad gabaryaheey aaminsan tahay in waxa kaliya lagaa doonayo in ay tahay in aad sariirta is dhigto oo aad ninka ka sugto wax waliba taasi waa fikrad qaldan ogaaw qalad weyn ayaad galeysa.
Ninka ma uu doonayo jir aan naf laheyn balse waxa uu doonayo in la weydaarsado dareemo .
Hadaad jeceshahay in ninka uu kaa dhunkado meel waliba oo jirkaada ah adna aad ka bakhiileyso , ogaaw wax aad ka taqaano ma jirto nolosha ragga , ninka waxa uu jecel yahay in meel waliba laga dhunkado .
Hadaad aamisan tahay in kaliya fara ka cayaarka sariirta laga sugayo in ninka uu kaliya bilaabo taasina waa qalad , ninka waxa uu jecel yahay in haweeneyda la fara cayaarto isla markaana u sheegto waxa ay dooneyso in uu u sameeyo dhanka raaxada.
Ragga waa neceb yihiin haweeneyda jecel in iyada loo raaxeeyo balse ninka aan dhandhansiineyn Sidoo kale, Ragga ma jecla haweeneyda fal celisyadeeda raaxada ka dhasha qarineysa , haweenka qaarkii ayaa xishood dartii u qariya haar raaxeedka yimaada xiliga weerarka sariirta , waxa ayna ragga jecel yihiin in ay dareemaan in gariirka galmada macaantooda gaarsiiyeen iyaga oo ka tusaale qaata , shanqar codeedka ka soo baxaya . neefsiga iyo iyadoo si saraaxad leh
Title: Ragga way necebyihiin Haweeneeda loo raaxeeyo iyada kaliya
Posted by Unknown, Published at May 31, 2016 and have 0 comments